उदयपुरमा शनिबार विहान टिपरको ठक्करबाट बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा गम्भिर घाइते ~
- नेपाली सन्देश शनिबार, फाल्गुन २५, २०७५ , 6.9K जनाले हेर्नुभयो
उदयपुर । उदयपुरमा शनिबार विहान टिपरको ठक्करबाट बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा गम्भिर घाइते भएका छन् । निर्माणाधिन मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका ७ स्थित चियाबारीकमानमा टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिदाँ मोटरसाइकलमा सवार बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा गम्भिर घाइते भएका छन् । लोकमार्ग निर्माणका लागि प्रयोग भएको ना. १ क ८३४७ नम्बर टिफरले बा. ९३ प ९४३२ नम्बरको मोटरसाईललाई ठक्कर दिदाँ मोटरसाईलमा सवार उदयपुरगढी गाउँपालिका ७ का ४८ वर्षे बलबहादुर मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । टिपरको ठक्करबाट बलबहादुरका छोरा सुजन मगर गम्भिर घाइते भएका छन् ।
मोटरसाईललाई ठक्कर दिने टिपरका चालक फरार भएका छन् । फरार टिपर चालकको खोजी भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते सुजनलाई उपचारकालागि विराटनगर पठाइएको स्थानीय सिएम गुरागाईले बताए । उनको अवस्था गम्भीर हरेको स्थानीयले बताए । मोटरसाईकल सुजनले चलाएका थिए । उनीहरु सदरमुकाम गाईघाटबाट घर जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेका हुन् ।
मृतक बदबहादुर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ०७४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नारायणबहदार कार्की चढेको गाडीमा विस्फोटनको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई कार्कीको गाडीमा विस्फोट गराउने नेकपा (विप्लव)को कार्यकर्ता भएको आरोपमा स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेर थुनामा रहेका मृतक मगर अदालतको आदेशले थुना मुक्त भएपछि गाँउघरमै बस्दै आएको स्थानीयले बताए ।
उदयपुरमा अहिलेसम्म टिपरको ठक्करबाट ४ जना, ट्रकबाट ४ जना गरी ८ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै मोटर साइकल दुर्घटनामा ७ जना, ट्याक्टर दुर्घटनामा १० जना, बसबाट एक जनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुरको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।